NKWUKWỤKWỤKWỌ ANYỊ - 60 Nke abụọ CHECKLIST - 9 Action Steps! ịmepụta azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị
Inwe Ọganihu Online na ngwaahịa ọ bụla, ọrụ, ntụrụndụ, azụmahịa, nzukọ ma ọ bụ ọbụna ịzụlite ego maka ọrụ ebere gị ma ọ bụ obodo gị!
Lee usoro nzọụkwụ 9 ị hụrụ na vidio ahụ, ha na-ekpuchikwa ya na free eCourse ma na ọtụtụ nkọwa zuru ezu, ntụziaka nzọụkwụ site n'ọzọ, ngwá ọrụ pụrụ iche na ihe ndị ị chọrọ iji mee nke ọma!
1) Nhọrọ isiokwu niche
Jide n'aka na ọ ga-adabara nkà gị, ike gị, agụụ mmekọahụ gị, ọdịmma gị, ma ịchọta ya na-atọ ụtọ!
2) Mee usoro okporo ụzọ
Ụzọ kacha mma gị ga-abụ ndị mmadụ; nwere mmasị n'isiokwu ị na-ekpuchi ma ha nwere mkpa nke na-anọgide na-emezughị ihe ị ga-enye ngwọta ma ọ bụ azịza ya.
3) Wụpụta Ndepụta Email
Ị chọrọ usoro nke ịdebanye aha na adreesị ozi-e nke ndị na-esonye na listi email gị site na ijuputa na obere ụdị.
4) Nye onyinye
Nye ndị ọbịa gị na ebe nrụọrụ weebụ onyinye nke ozi efu dị oke ọnụ maka nzaghachi maka adreesị email ha.
5) Gbanwee ozi ịntanetị
Mgbe ndị mmadụ na-enye gị adreesị ozi-e gị mkpa iji nweta usoro iji zipu ozi ịntanetị na-ewulite mmekọrịta, na-echetara ha ime ihe & ngwaahịa ndị ọzọ.
6) Họrọ Ngwaahịa ere
Ị nwere ike ree ngwaahịa gị ma ọ bụ ndị ọzọ, hụ hụ na ha dakọtara isiokwu gị & ọ bụghị oke ọnụ iji malite.
7) Nara ego online
Malite site na imeghe na iji akaụntụ PayPal ịzụta ihe ma nakọta ego & jiri ntaneti ngwaahịa na-anakọta ego maka gị.
8) Free & Marketing Marketing
Ịmepụta okporo ụzọ n'efu na-ewe oge dị ukwuu wee jikọta na ụfọdụ ndị akwụ ụgwọ maka ụgwọ ọrụ nke ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na-agba ọsọ ọsọ gị.
9) Ntọala Ngalaba, Bochum & Mkpokọta
Ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị mfe ma mana azụmahịa dị n'ịntanetị nwere onwe ya na ngalaba aha ya ma nwee ụlọ ọrụ ọkachamara wepụtara iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Mee ihe ugbu a site n'ịdenye aha n'okpuru!
ANYỊ BỤGHỊ! Kekọrịta ma ọ bụ ree Ozi gị - GDPR, Kuki & Nzuzo - Okwu & Ọnọdụ
Nzọụkwụ 9 na ONLINE! NKWUKWU na 60 Seconds - lee ya ugbu a !!
Get FREE Ọzụzụ ugbu a!
Debanye 24 Awa / 7 Days n'izu ma ị ga-enweta ozugbo;
Ntuziaka Ntuziaka ka ịtọlite ​​gị n'Intanet
EBook eBook (Inye Ọdịnaya)
Ịnweta ngwaọrụ m pụrụ iche & Resources
ANYỊ BỤGHỊ! Kwuo ma ọ bụ ree Ozi gị
GDPR, Kuki & Nzuzo - Okwu & Ọnọdụ
Carl Henry Global sa mere mgbalị niile. iji gosipụta ihe anyị na ngwaahịa na ngwaahịa anyị na-akwado na ikike ha. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị bụ otu n'ime mmadụ ole na ole ebe mmadụ nwere ike inwe nnukwu ego na obere ego ọ na-akpata, ọ dịghị nkwa na ị ga-enweta ego ọ bụla site na iji usoro na echiche na ebe nrụọrụ weebụ a na akwụkwọ ndị ebudatara. A gaghị atụgharị ihe atụ n'ime ihe ndị a dị ka nkwa ma ọ bụ nkwa nke ego. Enwe ike inweta ihe na-adabere na onye ahụ na-eji ngwaahịa, echiche na usoro anyị. Anyị adịghị akwalite ohere dị ka nke a dịka "ịba ọgaranya".